Forum serasera malagasy Miaraka amin'ny vadin'olona - Dinika forum.serasera.org
Miaraka amin'ny vadin'olona
Fitohizan'ny hafatra : Miaraka amin'ny vadin'olona
andorb - 17/07/2018 21:59
Bonjour, mba mangataka torohevitra azafady. Indrindra amin'ireo mpahay lalàna. Miaraka amin'ny vadin'olona aho ary efa fantatro fa efa manambady izy fa izaho kosa mbola tsy manambady. Tena tiako izy ary Mino sy matoky tanteraka aho fa tia ahy koa izy. Manan-janaka izy ary tsy foiny ny zanany, izaho rahateo tsy tiako izy ahafoy ny zanany, ilay vadiny anefa efa miahiahy fa misy olona miaraka aminy ka rehefa miresaka ny hoe isaraka dia tsy manaiky fa milaza fa hamotika anay roa raha fantany ary manao menace momban'ny zanak 'izy roa. Ny fanontaniana dia inona no afaka ataon'ilay ankilany te-hiala kanefa tsy i-perdiavany ny zanany? Ary raha sanatria fantatr'ilay vadiny aho, afaka mitory anay ve izy? Inona no porofo afaka entiny mitory anay? Ary farany, inona ny sazy miandry anay raha sanatria mitory izy?
sixi - 19/07/2018 13:14
bjr, amiko tsy tsara ny maka ny anjaran'ny hafa satria zay nakamban'ANDRIAMANITRA tsy azo sarahana fa raha sanatria tena tianao lay vadin'olona io ary tsy tia ny vadiny intsony kou izy dia aleo vita ny divorce anzizareo vao miditra enao manjary fahadisoana anao na @ lalana na eo anatrehan'ANDRIAMANITRA izany.
mirananirina - 21/07/2018 17:22
Tsy mpahay lalàna aho fa mba hiteny hevitro: Marina fa mety hoe tsy manaiky hisaraka mihitsy ny 1. Ary tena misy foana izany! Nefa raha vao mampiditra divorce ny 1 na tsy manaiky aza ny 1 dia mangataka manao séparation du corps izy @ izay afaka manao izay tiany atao.
Raha tsy manao io izy dia diso foana adultère.
Fa raha manao io kosa izy dia efa mahalala fanjakana fa izy te hisaraka nefa ilay 1 tsy manaiky. Resaka zaza indray izay hitany fa mahavita azy (izay marihiko fa matetika vehivavy foana mahazo azy), dia ny 1 droit de visite; akoatra hoe mamo lava na efa nisy fitarainana fa tsy mahay mitaiza sns ilay vehivavy vao omeny lehilahy. Azony fanjakana koa anefa manao hoe 1 sem any @ 1 dia 1 sem any @ 1. Ka tsy misy tokony hatahoranareo resaka zaza.
Izany hoe raha ianao tiany dia tokony mampiditra divorce izy na hanaiky na tsia ny 1 dia miady any @ tribunal.
andorb - 21/07/2018 21:57
Mankasitraka anareo izay namaly
Freddyco - 05/09/2018 08:17
Tsy manambad bdb reu v d...hihih
Sad mis ts mait mits